Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Mgbake Njem njem ikuku nke June na-aga n'ihu na-emechu ihu
Ọchịchọ ka dị n'okpuru ọkwa pre-COVID-19 n'ihi mmachi njem mba ofesi.
Mkpokọta ihe achọrọ maka njem ụgbọ elu na June 2021 (tụrụ na kilomita ndị njem ma ọ bụ RPKs) dara 60.1% ma e jiri ya tụnyere June 2019.
Ihe ndị njem mba ofesi chọrọ na June bụ 80.9% n'okpuru June 2019.
Ngụkọta ọnụ ụlọ chọrọ belatara 22.4% karịa ọkwa ọgba aghara (June 2019).
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) kwuputara arụmọrụ ndị njem chọrọ maka June 2021 na -egosi ntakịrị nkwalite na ahịa njem ikuku mba na mba. Ọchịchọ ka dị n'okpuru ọkwa pre-COVID-19 n'ihi mmachi njem mba ofesi.
Dị ka ntụnyere dị n'etiti nsonaazụ 2021 na 2020 kwa ọnwa na-agbagọ site na mmetụta pụrụ iche nke COVID-19, belụsọ na ekwetaghị n'ụzọ ọzọ, ntụnyere niile ga-abụ na June 2019, nke gbasoro usoro chọrọ.
Mkpokọta ihe achọrọ maka njem ụgbọ elu na June 2021 (tụrụ na kilomita ndị njem ma ọ bụ RPKs) gbadara 60.1% ma e jiri ya tụnyere June 2019. Nke ahụ bụ ntakịrị nkwalite karịa mbelata 62.9% edere na Mee 2021 na Mee 2019.
Ihe ndị njem mba ofesi chọrọ na June bụ 80.9% n'okpuru June 2019, mmụba sitere na mbelata 85.4% edere na Mee 2021 karịa afọ abụọ gara aga. Mpaghara niile ewezuga Eshia-Pasifik nyere aka na nnukwu ịrị elu.
Mkpokọta ọnụ ụlọ chọrọ belatara 22.4% karịa ọkwa nsogbu (June 2019), ntakịrị uru karịa mbelata 23.7% edere na Mee 2021 na oge 2019. Ejikọtara arụmọrụ n'ofe isi ụlọ ahịa na Russia na -akọ akụkọ mgbasawanye siri ike ebe China laghachiri na mpaghara adịghị mma.
“Anyị na -ahụ mmegharị n'ụzọ ziri ezi, ọkachasị n'ụfọdụ ahịa ụlọ dị mkpa. Mana ọnọdụ maka njem mba ofesi adịghị nso ebe anyị kwesịrị ịnọ. June kwesịrị ịbụ mmalite oge kacha elu, mana ndị na -anya ụgbọ elu na -ebu naanị 20% nke ọkwa 2019. Nke ahụ abụghị mgbake, ọ bụ nsogbu na -aga n'ihu kpatara enweghị ọrụ gọọmentị, "Willie Walsh, onye isi oche IATA kwuru.